Ikhaya eliNcinane laseHilltop
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguDoug
Ikhaya eliNcinci elitsha! Ithe ngcu phezu kwenduli ejonge kwindawo enomtsalane yabalimi basePanguitch. Ifihlwe ngemibono engakholelekiyo macala onke. Lala 3-4 kamnandi ngaphakathi. Ukuze ufumane amava amangalisayo, phuma kwaye ulale phantsi "kwehlabathi elaziwayo" isibhakabhaka ebusuku kwii-hammocks. Imizuzu engama-20 nje. ukuya eBryce Canyon (45 ukuya eZiyon)! Fumana ukunyuka okumangalisayo / ukukhwela ngaphandle komnyango wangaphambili kwiihektare ezingapheliyo zomhlaba ovulekileyo weBLM onemizila, imijelo yokuloba, izilwanyana zasendle, nokunye okuninzi! (Umnini uneebhayisekile ze-mtn eziqeshiswayo - bona iifoto).
Ikhaya eliNcinci libekwe ngasekunene kwakho encotsheni yendlela (ifihlwe emva kwemithi ethile). Nje ukuba i-asphalt driveway ijike ibe yigrabile kusafuneka uhambe ngokuthe ngqo malunga neemitha ezingama-20 ngaphambi kokuba ubone iKhaya eliNcinci ngasekunene kwakho.
Iiapps zemephu zenza umsebenzi olungileyo zizisa ngqo kwi-driveway (amanani angama-449 akwipali yocingo ekungeneni kwendlela yokungena).
Ukuba ufika sekumnyama kunokuba nzima ukubona ikhaya de ube ulungile kulo. Landela le migaqo ingasentla kwaye uyakuphila.
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, 1 iisofa eziyi-, Iibhedi ekuthiwa zii-hammock eziyi-2
4.94 ·Izimvo eziyi-194
4.94 · Izimvo eziyi-194
Ndihlala ndinethemba lokudibana neendwendwe zam - kwenza ukuba ngumbuki zindwendwe kuvuze kakhulu. Nangona kunjalo, andihlali kwipropati kwaye andisoloko ndikhona. Ukuba ndikhona ndiyayihlonipha imfihlo yabo kwaye ndibavumele ukuba bakhokele kwinqanaba lokunxibelelana.
Ndihlala ndinethemba lokudibana neendwendwe zam - kwenza ukuba ngumbuki zindwendwe kuvuze kakhulu. Nangona kunjalo, andihlali kwipropati kwaye andisoloko ndikhona. Ukuba ndikhona n…